Voatendry ho Tale Jeneralin’ny « Fonds de Développement Local. » na FDL Atoa Razafindrakoto Rado Harinjaka . Efa nandraisana didim-panjakana ihany koa ny fampahafantarana ny fitsaharan’ny fotoam-piasan’ny Tale Jeneraly teo aloha.
Hafindra eny Amboanjobe ny toeram-pitobian-tsolika etsy Ankorondrano, ka noraisina ny didim-panjakana milaza ny filan’ny fanjakana ireo tany manodidina ny fokontany Amboanjobe sy Ambohidrazana, ao anatin'ny kaominina ambanivohitr’i Bongatsara, Distrikan’Antananarivo Atsimondrano. Hisy ihany koa ny fanamboarana ny kihon-dàlana manoloana ny lalam-pirenena faha 7 izay hiteraka fakana ireo tany na fandravana ireo trano manodidina ny asa fanorenana.
Nanome toromarika hentitra ny governemanta ny amin’ny tsy maintsy hanamafisana sy hampitomboana ireo fepetra entina miaro ny Malagasy sy ny firenena manoloana ny fihanaky ny valan’aretina coronavirus ny filoham-pirenena nandritra ny filankevitry ny minisitra omaly. Tafiditra ao anatin’izany ny fanaraha-maso eny amin’ireo seranam-piaramanidina sy seranan-tsambo rehetra ary ny fanaovana serasera matotra.